कस्तो हुन्छ आमाछोराबीचको माया ? यस्तो देखियो ‘मेरी मामु’ को ट्रेलरमा (ट्रेलर हेर्नुस) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentकस्तो हुन्छ आमाछोराबीचको माया ? यस्तो देखियो ‘मेरी मामु’ को ट्रेलरमा (ट्रेलर हेर्नुस)
कस्तो हुन्छ आमाछोराबीचको माया ? यस्तो देखियो ‘मेरी मामु’ को ट्रेलरमा (ट्रेलर हेर्नुस)
August 17, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News 0
बिहीवार फिल्म ‘मेरी मामु’ को अफिसियल ट्रेलर लञ्च भएको छ । यसअघि ‘प्रेमगीत’ सिरिजका सफल फिल्म निर्माण गरिसकेका निर्माता सन्तोष सेनले निर्माण गरेको फिल्म ‘मेरी मामु’ को ट्रेलर जावलाखेलमा रहेको डिएभी स्कूलका विद्यार्थीहरु तथा कलाकार र निर्माण टिमको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको हो । यो फिल्ममा निर्माता सन्तोषका ६ बर्षिय छोरा आयुब सेनको प्रमुख भूमिका रहेको छ । आयुबको डेब्यु फिल्म भएकाले पनि फिल्मको चर्चा अलि बढी चुलिएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा पात्रहरुलाई सस्पेन्स शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । ट्रेलरले फिल्म सस्पेन्स थ्रिलर रहेको महशुस गराउँछ । बाल मनोविज्ञानमा अधारित भनिए यो फिल्ममा आमा–छोरा बीचको दूरी र आत्मीयता फिल्मको मुख्य कथा भनिएको थियो । यद्यपि, सार्वजनिक ट्रेलरमा पारिवारिक द्वन्द्व बढी देखाइएको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक ट्रेलर र कथामा केही विरोधावास पनि देखिएको छ । कुसुम गुरुङले यो फिल्ममा आयुबकी आमाको भूमिका निर्वाहा गरेका छन् । त्यस्तै, पिताको भूमिकामा अभिनेता शारुक ताम्राकार रहेका छन् । ‘प्रेमगीत २’ मा चर्चा कमाएकी अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरीको यो फिल्ममा पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्माता सेनले बाल मनोविज्ञानमा आधारित फिल्मले एक बालकको आमाप्रतिको मायालाई देखाउन खोजिएको बताए । निर्देशक तथा लेखक यम थापाले ‘मेरी मामु’ हरेक नेपालीले हेर्नैपर्ने फिल्म भएको बताए ।
फिल्मलाई पुरुषोत्तम प्रधान र मानकृष्ण महर्जनले खिचेका हुन् । भाद्र १५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्ममा बनिश शाह र भुपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन तथा एलिस कार्कीको पाश्र्व संगीत रहेको छ ।
‘ब्ल्याक’ को निर्माण टिम र कलाकार राजधानीका हल–हलमा, आँचललाई हेर्न यसरी ओइरिए दर्शक (फोटोफिचर/भिडियो)